Dhaq Dhaqaayo Siyaasadeed iyo Kuwa Melleteri Oo Ka Jira Magaalada Kismaayo [Warbixin].
Hoggaamiyaal siyaasadeed oo loolan kula jira dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa kusii qulqulaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Maanta barqadii waxaa Kismaayo gaaray Hoggaamiyaasha maamullada Galmudug iyo Hirshabelle kuwaasi oo watay diyaarado khaas ah kanasoo amba baxay magaalooyinka Cadaado iyo Jowhar.
Axmed Ducaale Gelle Xaaf oo xildhibaano ay maalgelisay dowladda Federaalka ay sheegeen in ay xilkii madaxtinimo ka qaadeen ayaa hiillo dhanka siyaasadda ah ka helay dhammaan maamul goboleedyada kajira Koonfurta iyo bartamaha Somalia.
Xaaf waxaa garoonka Kismaayo kusoo dhoweeyay Axmed Madoobe iyo Shariif Sakiin saacado kadibna waxaa magaalada gaaray Waare oo Ah Madaxweynaha ‘Hirshabelle’, wufuuddan waxay berri ka qeyb geli doonaan shir aan caadi aheyn oo ay iskaashi iyo midnimo ku gaarayaan maamullada shisheeyaha kawada hoos shaqeeya balse khilaafka kala dhaxeeyo Villa Somalia.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in marka Cabdi Wali Gaas uu gaaray Kismaayo ayna dowladda Federaalka diri doonto wafdi ka socda wasaaradda arrimaha dibadda si wafdigaas goob joog uga noqdo waxa ay hoggaamiyaashu ka wada hadli doonaan.
Maamullada Jubbaland,Koonfur Galbeed,Galmudug,Hirshabelle iyo Puntland ayaa isku aragti ka noqon doono dhanka siyaasadda waxaana lafilayaa in dhammaan maamulladaas ay markale ku celiyaan in ay ku saf yihiin isbahaysiga Imaaraatka Carabta iyo Sacuudiga.
Dhinaca kale dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ee Kismaayo ka socda waxaa barbar socda dhaq dhaqaaqyo melleteri oo ay wadaan ciidamada melleteriga Kenya ee ku sugan saldhigyo ay uga sugayihiin magaalada, dad ku sugan Kismaayo waxay sheegeen in ciidamada Kenya ay faarujiyeen saldhiggii ay ku lahaayeen dhismaha Jaamacadda Kismaayo.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in Markab dagaal oo ay leedahay dowladda Kenya uu kusoo xirtay dekadda Kismaayo waxaana lagu rarayaa gaadiid dagaal iyo saanado melleteri, warar kale waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ee ku sugan degmada Afmadoow ay wadaan dhaq dhaqaaq aan la ogeyn oo shaki ku beeray maleeshiyaadka iyo saraakiisha Axmed Madoobe.
Lama oga in Kenya ay dib ugurasho lama filaan ah ka sameyn doonto gobolka Jubbada Hoose oo sanaddii 2012 ay duullaan gardarra ah ku qabsatay.
Weerar Askar Lagu Dilay Saldhig Melleterina Lagula Wareegay Oo ka Dhacay Deegaanka Tixsiile Ee Sh/Hoose.